Ahoana ny fiantraikan'ny vokatra momba ny vokatra SEO: Fahatakarana avy amin'ny Semalt
Ho an'ny orinasa e-varotra, ny fahombiazan'ny fikarohana ara-pahombiazana dia matetika mahasoany fahombiazany. Maro amin'ireo sehatra SEO no tsy mifantoka amin'ny hatsaran'ny vokatra vokatra. Mifantoka amin'ny endrika toy ny teny fikarohana,miverina amin'ny rohy, ny fisian'ny tambajotra sosialy sy ny teknikan'ny tranonkala. Na izany aza, misy ny antony indirect indraindray mety hisy fiantraikany amin'ny vokatra SEO anao koa.
Jack Miller, mpitantana ny Customer Succcess Semalt Dieny Digital dia manazava ny fomba fiantraikan'ny angona vokarin'ny vokatra.
Tsy misy fiantraikany mivantana amin'ny SEO mivantana - technology consulting firms in Portland. Na izany aza, na inona na inona mahakasika ny fifandraisana anatiny,Ny URL sy ny votoatiny dia afaka manana fiantraikany amin'ny voka-pikarohana biolojika. Rehefa mameno ny tranokalanao miaraka amin'ny angona, fampahalalana toy nyNy sokajy, vondrona, ary votoatin'ny vokatra dia miseho amin'ny vokatra rehetra ampidirinao ao amin'ny rafitra. Ny tranonkala tsirairay dia manana fitantanana votoatyrafitra izay mitantana io vaovao io amin'ny alàlan'ny fanamarinana boaty ao amin'ny tahiry. Ireo saha rehetra ireo sy ireo boaty fanamarinana dia misy fiantraikany amin'ny fahamendrehanany vokatra rehetra sy ny fampahalalany.
Datafom-baovao sy fifandraisana anatiny
SEO dia mitaratra ny endriky ny fanamafisana ny lohateny, URL ary famaritana vokatra.Etsy ankilany, ny angona angona vokarin'ny vokatra dia misy fiantraikany amin'ny fomba fisehon'ny fampahalalana ao anaty tranonkala. Ahoana ny endriky ny vokatra, vondrona, mifandrayary ny marika dia manana fiantraikany amin'ny lanjany mifandraika amin'ny tontolon'ny mpampiasa. Ity soso-kevitra ity dia iray amin'ireo tanjon'ny algorithm Google izay mifantoka amin'ny fotoanafamakafakana rafitra fitantanana votoaty hozaraina.
Ohatra, ny lalan-tsarimihetsiky ny sokajy dia mety ho - Target> shirts> ny akanjon'ny lehilahy>halany. Ao amin'ity tranokala ity, afaka mividy akanjo lava feno akanjo izay an'ny sokajy mozika toy ny sokajin'akanjon'ny lehilahy. Here, the fullNy akanjo lava dia an'ny fizarana mozika, fa koa amin'ny antsasak'adiny. Ny anaran'ny vokatra dia ny lohatenin'ny H2 sy ny endriky ny famaritanaao amin'ny famaritana meta.
Votoaty duplicate dia miseho rehefa misy milina fikarohana mikendry marika amin'ny URL marobepage. Ohatra, ny rohy duplicate dia azo fehezina amin'ny fampiasana ny marika kanônika. Ny votoaty duplicate dia mety hanimba ny SEO. Mampihena nyManam-pahefana ao amin'ny pejy iray satria ny fizotran'ny fifamoivoizan'ny URL maro dia maro izay mahatonga azy ho sarotra.
Na izany aza, ny fanitsiana ny votoaty duplicate dia mora mora. Mila mahita ny rehetra ny olonany URLs manondro vokatra mitovy amin'izany. Ny famindrana ny rohy mankany amin'ny pejy tianao dia afaka manampy anao hamerina ny fahefany amin'iotranonkala manokana. Ohatra, ny fanoratana indray ny code na fametrahana code codes redirect 301 dia mety hamaha io olana io ary hamerina indray ny fomba fitenin'ny pejy iray.
Ny SEO dia manan-danja amin'ny orinasa an-tserasera raha vao miantoka ny fisian'ny aterineto matanjaka.Maro ireo antony mety hisy fiantraikany amin'ny fampiroboroboana ny tranokala eo amin'ny fametrahana ireo singa fototra. Anisan'ireo singa ireo ny angona vokarina. Amin'ny ankamaroanytranga, ireo mpangalatra dizitaly dia tsy mahatsapa ny maha-zava-dehibe azy ao amin'ny SEO ary matetika no tsy miraharaha azy. Na izany aza, araka ny hita etsy ambony, dia misy vokany amin'ny URLary ny lanjan'ny votoatiny dia misy fiantraikany amin'ny fomba hibaiko ny tranonkala Google. Amin'ny fampiasana ny fahalalana etsy ambony, dia afaka manasongadina ireo antony mety hitrangadia misy fiantraikany amin'ny fomba fijerin'ny tranonkala momba ny vokatra momba ny vokatra. Azo atao ihany koa ny manitsy ny sasany amin'ireo fahadisoana iombonana tahaka ny tsy hitasokajy na fampahalalana momba ny vokatra.